Madaxweyne Xasan Sheekh oo tilmaan ka bixiyey qaabka xukuumadda la sugayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo tilmaan ka bixiyey qaabka xukuumadda la sugayo
Mareeg.com: Madaxweynaha dowlada Federaalka Soomaaliya oo shir jiraa’id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xukuumadda soo socota ay ka wada muuqan doonaan dhinacayada kala duwan ee isku haya siyaadda dalka.
Madaxweynaha oo ka hadlayay ayaa halka ay mareyso soo magacaabista wasiirada cusub ayaa sheegay in isaga iyo ra’iisal wasaaraha iska arkeen arinta soo magacaabidda, islamarkaana isku afgarteen in xukuumada cusub iska dhex arkaan dhamaan qabaa’ilada iyo garabyada siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya.
“Waxaa aniga iyo ra’iisal wasaaraha heshiis ku nahay in xukuumaddu ahaato, xukuumad lagu wada jiro, dadka Soomaaliyeed qabaa’ilkooda ay u wada dhan yihiin, dad isku aragti iyo isku ra’iyaa nahay dhahaya wey jiraan dadkaasina ra’igooda aad aad ayaa loo ixtiraamayaa” ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya.
Hadalka madaxweyne Xasan ayaa muujinaya in qaar ka mid ah xubnihii isaga ku dhawaa ay kusoo laaban doonaan Golaha Wasiirada, sidoo kalana wasiiro la siin doono garabyada ku kacsanaa madaxweynayha iyo wasiirada saaxiibka la ahaa.
Turkiga oo Facebook ku qasbay xiritaanka bogagga loogu gefay Nabi Muxamed
Baarlamanka Soomaaliya oo ka doodaya Xeerka Doorashooyinka